Kenya: Maneho hevitra momba ny fanapoahana baomba tany amin’ny kianjan’i Uhuru ireo mpitoraka blaogy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Jona 2010 8:14 GMT
Olona enina no maty ary 75 no naratra tamin'ilay fipoahana nandritra ny hetsika ara-politika tany Nairobi tamin'ny Alahady. Nokarakarain'ny vondrona “Tsia” io hetsika io, izay manohitra ny fampihàrana ny lalampanorenana vaovao. Ireo mpitondra fivavahana any Kenya dia nanameloka ny fitondràna tamin'iny fipoahana iny. Ny Filoha Mwai Kibaki sy ny Praiminisitra Raila Odinga dia ao amin'ny vondrona “ENY”, izay manohana ny lalampanorenana. Amin'ny volana Aogositra amin'ity taona ity no hatao ny fifidianana io lalampanorenana vaovao io.
Ny fanontaniana ezahan'ny ankamaroan'ireo Keniana amin'ny aterineto valiana dia ny hoe iza no tao ambadik'iny fipoahana iny? Tsy manàla ny fisian'ny fifandraisana amin'i Somalia i Ken Opalo :
Miteny i Kenya Political fa mitondra any amin'ireo olana eo amin'ny tsy fandriampahalemana, tsy fifandeferana ara-pivavahana ary herisetra politika any Kenya iny tranga iny:
Manondro koa izy fa ity no tranga faharoa mikasika ny fandriampahalemana tamin'ity taona ity:
Onyango Oloo dia nanolotra ny tenany ho “manampahaizana mitondra hevitra mitombina momba izay tao ambadiky ny fipoahana tao amin'ny Kianjan'i Uhuru”:
Manàla ny vondrona “ENY” amin'ny lisitr'ireo ahiahiana izy:
Manàla ny fiangonana ihany koa izy:
Manana ny heviny manokana i Tome Francis avy ao amin'ny Kenya Young Voters Alliance:
Mino i Kumekucha fa azontsika atao ny mahita hoe iza no tompon'andraikitra, amin'ny fametrahana ireto faontaniana manaraka ireto amin'ny tenantsika:
Mino i Kenyan Entrepreneur fa vokatry ny ady fahefana ara-tantara misy eo amin'ireo Kikuyu sy ny Kalenjin izao:
“Raha an'ny Kenyana ny lalampanorenana, maninona ireo Kenyana enina amin'izao no tsy mampitovy fomba fijery?,” hoy Kenya My Land manontany:
Ireto manaraka ireo ny fanehoankevitr'ireo Keniana ao amin'ny Twitter (#UhuruBlast):